Ady na sidina: Rehefa mamela azy ireo hisintona anao hiala amin'ny fiaramanidina ianao no fanapahan-kevitra tsara indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ady na sidina: Rehefa mamela azy ireo hisintona anao hiala amin'ny fiaramanidina ianao no fanapahan-kevitra tsara indrindra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • malaza ankehitriny
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia "nangatahin" ny United Airlines hamela fiaramanidina aho, saingy nolaviko izany. Rehefa tonga tao Denver ny sidina 311 dia tsy hitan'izy ireo ny sezakodia misy heriko. Tokony hoentina teo am-baravaran'ny fiaramanidina fotoana fohy taorian'ny nidirany. Niandry aho ary niandry, fa tsy nisy sezakodia. Tian'ireo mpiasan'ny sidina aho hamela ny fiaramanidina eo amin'ny sezan-dry zareo fa tsy nety aho. Nilaza tamin'izy ireo aho fa tsy hiala amin'ny toerako raha tsy eo amin'ny varavaran'ny fiaramanidina IZAO ny sezako kodiarana. Te hanomboka hiakatra amin'ny sidina manaraka izy ireo, te hiala ireo mpiasa ankehitriny, ary te hanadio ny fiaramanidina ny mpiasa. Saingy fantatro raha very na nopotehin'i United ny sezakeliko dia mety hidika izany hoe mijanona eo an-tampon'ny tetezana jet mandritra ny andro maromaro mandra-pahitan'izy ireo ny ahy na nividianany iray vaovao. Notadidiko ny fotoana tokony hiandrasako taorian'ny nidinan'ny fiaramanidina, ary nampitandremako azy ireo tamin'ny ora iray izay hiantsoako ny vaovao eo an-toerana ary hiantsoana ihany koa aho 911 mba hahafahako mametraka antikàna fandikan-dalàna momba azy ireo. Ny iray tamin'ireo mpiasa an-tsambo dia nanolo-kevitra ny hahafahan'izy ireo “manao” ahy hiala amin'ny fiaramanidina. Hoy aho tamin'izy ireo: “Tsy maintsy hotaritarihinao hiala ity fiaramanidina ity aho alohan'ny handehanako an-tsitrapo tsy misy ny sezakodia misy heriko eo am-baravarana.” Nampitandrina azy ireo ihany koa aho hoe: «Afaka miantso ny vaovaom-baovao eo an-toerana aho izao… tsy tian'ny besinimaro ny mahita olona iharan'ny tsy rariny."
Ankehitriny, ny United Airlines dia nanaraka ny zavatra nandrahona ny hataony tamiko. Notarihin'ny jiolahimboto tamin'ny badge ny mpitsabo vietnamiana iray hiala fiaramanidina rehefa avy nanenjika azy izy. Soa ihany fa nalaina tamin'ny fakantsary ilay tranga ary avy eo dia nalefa tamin'ny fahitalavitra manerantany. Samy miresaka momba ny maha-fanamavoana an'i United Airlines ny rehetra.
"Pissed Off Redneck" dia niaro tamin-jotom-po ilay Aziatika niharam-boina, tamin'ny filazany tao amin'ny YouTube fa nahita valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety avy amin'ny fianakavian'ilay mpandeha izay nahitana azy fa ilay mpanjifa nipetraka dia "voan'ny aretin-koditra, orona tapaka, very nify, ary mety tsy maintsy namerina fandidiana. " "Pissed Off Redneck" dia nanohy nilaza fa "Ny olona sasany dia mety nitantana an'io tamin'ny fomba hafa, tsy nikiakiaka sy nikiakiaka toy ny bitika, fa lazaiko aminareo, ireo zanak'akoho ireo, nokapohiko izy ireo na dia nanandrana nisintona aza mivoaka aho. ”
Any amin'ny faritra sasany, ara-dalàna ny miverina rehefa misy manafika anao amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny jiolahim-boto iray. Ilay fotokevitra, na dia tsara amin'ny teôria aza, dia somary misavoritaka ihany, indrindra rehefa nahita ny Departemantan'ny polisy ao Chicago namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fanambarana iray izay lainga mivaingana: "Tonga teny an-toerana ireo mpiasan'ny fiaramanidina, nanandrana nitondra ilay olona hiala ny sidina rehefa nianjera izy nokapohiny teo amin'ny lohan-tànany ny lohany. ” Na jiolahim-boto misy badge, na fikambanan'ireo jiolahim-boto mandainga miaraka amin'ny badge, dia hiasa mafy izy ireo hahita fomba tsy marina hanodinana ny valintenin'ilay niharam-boina tamin'ny herisetra tsy ara-dalàna.
Ted Williams, mpisolovava, dia nilaza tao amin'ny MSNBC fa mino izy fa manana anton'asa ny mpanjifa noho ny fanenjehana ireo manampahefana mpampihatra lalàna noho ny “hery tafahoatra…. Heveriko fa nisy ny fanagadrana diso, nisy ny fanitsakitsahana ny fifanarahana, ary mazava ho azy fa nisy fihenjanana ara-pihetseham-po niniana natao. ”
Nahazo diplaoma tamin'ny sekoly fanabeazana aho, nahazo ny mari-pahaizana momba ny lalàna aho, ary nanao asa diplaoma taorian'ny diplaoma ihany koa, avy eo asa vita diplaoma bebe kokoa amin'ny antropolojika, noho izany dia fantatro tsara momba ny fihetsika tsy ara-dalàna, tsy voalamina hahafantarana azy rehefa hitako izany. Raha ny amiko dia nandà tsy hiala ny sidina United 311 aho satria fantatro fa tompon'andraikitra ny mitondra ny sezako misy kodiarana herinaratra amiko ilay mpitatitra. Vonona ny hamela azy ireo hisintona ahy hiala ny fiaramanidina aho, saingy tsy hanomboka ny kiakiaka aho raha tsy eo alohan'ny olona marobe miaraka amina fakantsary handefa izany.
Leonard French, izay mandalo amin'ny "Mpisolovava amin'ny zon'ny mpamorona tianao indrindra" ao amin'ny YouTube, dia niady tamin'ny alàlan'ny antontan-taratasin-tsarety United ary tsy nahita fiteny manome an'i United zony hanala mpandeha mitaingina iray amin'ny fiaramanidiny iray noho ny "overbooking". Izay zotram-piaramanidina manana saina mahazatra dia nanolotra fanentanana fotsiny mba hahatonga ny olona handray sidina hafa, toy ny fampiakarana ny ante.
Isiah Friedlander dia namaly ny iray amin'ireo votoatin'i Leonard French momba an'io lohahevitra io, tamin'ny filazany hoe: "Raha tao anatin'io fiaramanidina io aho, dia nokapohiko ireo" mpiambina "ireo ho an'ny fahafinaretana sy fahafinaretana fotsiny, aza raharahanao raha handeha any am-ponja aho , mendrika izany, ary ho tsapako ho mpanjaka reharehako ny tenako. ”
Ny olon-kafa dia nanamarika fa tokony homena ny famaky ny polisy fa tsy amin'ny heviny an'ohatra.
Rehefa tao anaty toe-javatra be loatra nanidina tany Milano ny vadiko, Marco, dia nomeko azy an-telefaona haingana ny fomba fifampiraharahana momba ny famporisihana azy manokana niaraka tamin'i Delta rehefa tadiavin'ireo mpiaro manidina hafa ny sezany. Tsy azoko atao ny mifanakalo hevitra momba ny fandrobana noho ny antony ara-dalàna, fa ndao lazaina fotsiny fa ny "tambin-karama" nolavina dia mihoatra ny fetra "ara-dalàna" resahin'ny ankamaroan'ny olona amin'ny fahitalavitra. Ampy izay ny fandoavana saika ny herinandro manontolo ho an'ny olona roa ao amin'ny Sandals Resort Emerald Bay. Vola tena izy, tsy tapakila na tapakila amin'ny karazan-javatra rehetra.
Betsaka ny resaka tokony hataon'ny Dr. Dao amin'ny United. Heveriko fa tsy ny fitoriana no vahaolana tsara indrindra. Raha manome azy iray tapitrisa dolara i United, dia ampitainy amin'ny mpanjifa izany volavolan-dalàna izany ary ny olon-drehetra no handoa izany, fa ny CEO kosa, Oscar Muñoz dia mahazo fanorana sy mitaingina Mercedes-Benz amin'ny fety. United dia tokony horaisina toy ny zaza dimy taona; mila fotoana fialan-tsasatra izy ireo. Raha ny tena manokana dia lazaiko fa ny DOT dia tokony hanafoana ny tombon-tsoa azon'i United manidina avy any Chicago mankany Louisville mandritra ny enim-bolana na herintaona, mamela ireo mpitatitra hafa manana fitantanana tsara kokoa hanompo ny vahoaka eo anelanelan'ireny tsena ireny. Amin'ny alàlan'ny “mpitatitra hafa” dia tsy voatery hiresaka an'ireo telo lehibe aho fa miaro ny lanitra misokatra. Mahery loatra ireo telo lehibe ary mila fifaninanana tena izy ireo. Afaka nanidina mora foana io zotra io ny Air Canada raha nanova ny lalàna hamela ny lanitra misokatra ny kongresy. Scandinavian Airlines dia sivilizasiona loatra ka tsy maharesy ny mpandeha. Aleoko manidina an'i Lufthansa avy any Detroit mankany Hawaii raha avelan'ny kongresy izany.
Ny fandavana ny fankatoavana ireo jiolahimboto misy marika rehefa avy nitaingina ara-dalàna ianao dia aleo avelanao hisintona anao hiala ny fiaramanidina eo alohan'ny fakantsary. Ny telo lehibe dia mivoatra ny toe-tsain'ireo mpihetsiketsika amin'ny resaka fandefasana ny sidina, ary mila saziana izy ireo noho ny fahaverezan'ny tombontsoa fa tsy ny sazy azon'izy ireo ampitaina amin'ny besinimaro. Ny famelana ireo mpitatitra azo antoka toa an'i Lufthansa, SAS, ary Qantas hiasa amin'ny sidina anatiny dia hampianatra ireo telo lehibe fa misy vokany ny fitondran-tena ratsy.